नोट चल्ने, भोट नचल्ने ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध नोट चल्ने, भोट नचल्ने !
२०७९, १ बैशाख बिहीबार १४:५९
नेपाल सरकारले यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अहिले चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरु प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबीसहित सक्दा चर्का भाषण गरिरहेका छन् । मतादाता नामावलीमा नाम होस् कि नहोस् जनता आफू तिर तान्ने होडबाजी चर्को छ । नेपालमा चुनावी माहोल तातिरहेकै बेला विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक र अधिकारका लागि कोही बोलेको पाइँदैन । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले आफूले मताधिकार पाउनु पर्ने आवाज बेला बेलामा उठाए पनि यसको न्यायोचित सम्बोधन हुन् भने सकेको छैन ।
Previous articleनयाँ वर्ष मनाउन म्याग्दी र मुस्ताङका पर्यटकीय क्षेत्रमा भीड
Next articleपोल गाडेको तीन वर्षमा पनि बलेन बिजुली